Tag: xaqiiqda dhabta ah | Martech Zone
Tag: Xaqiiqada dhabta ah
Dardargelinta tiknoolajiyada waa neef qaadasho. Haddii aad i weydiin lahayd ra'yigayga ku saabsan xaqiiqda dhabta ah sanad ka hor, waxaan u maleynayaa inaan kuu sheegi lahaa inay fursad yar u heshay waxbarashada iyo madadaalada. Si kastaba ha noqotee, sidaan ku sheegay qoraal dhaweyd ka dib markii aan ka soo qaybgalay Dell Technology World, markaan arko isbeddelka dijitaalka ah ee adduunka ka dhacaya ayaa beddelaya aragtidayda ku saabsan wax walba. Waa maxay Xaqiiqada Virtual? Xaqiiqada Virtual (VR) waa